महिलालाई बियर खन्याउनु महिला हिंसा हो कि होइन ? – दीपकराज « Mazzako Online
महिलालाई बियर खन्याउनु महिला हिंसा हो कि होइन ? – दीपकराज
नेपाली फिल्म बजार पहिल्लो समय निकै तातेको छ । यतिखेर नायिका ऋचा शर्मा र ‘छक्का पञ्जा’ टीमको फेसबुक युद्ध निकै चर्चामा छ । ‘छक्का पञ्जा’ टीमले फेसबुक मार्फत ऋचालाई ’गेट विल सुन’ भनेर लेखेदेखि ऋचालाई समर्थन गर्दै नायिका रेखा थापाले ‘छक्का पञ्जा’ युनिटलाई ’जोक्कर’ सम्म भन्न भ्याइन् ।
फिल्म ’फिर्के’ को ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित भएका दीपकराजले आफ्नो भनाईमा राखे । उनले भने हामीले निर्माण गरेका कुनै पनि फिल्ममा महिला हिंसा भएको देखाएका छैनौँ । उनि थप्छन्–‘अन्य फिल्ममा महिला माथी बियर खन्याउनु महिला हिंसा हो कि होइन ? फिल्मलाई नराम्रो भन्न पाइन्छ । संसारका कुनै पनि फिल्म सर्वप्रिय छैन । कसैलाई त्यो फिल्म राम्रो लाग्छ कसैलाई राम्रो लाग्दैन । कुनै फिल्मले व्यापार र्गयो भन्दैमा राम्रो फिल्म हुन्छ भन्ने छैन र व्यापार गतिलो नगर्दैमा फिल्म राम्रो हुन्न भन्ने हुँदैन । यसलाई दाँज्ने र तौलने कुनै तराजु छैन ।’
केही दिन अगाडि राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा नायिका ऋचा शर्माले ‘छक्का पञ्जा’ मा महिलालाई दैनिक पिट्न पाउनु पर्छ भन्ने दृश्यमा ताली पिट्ने दर्शकलाई ‘मूर्ख’ भनेको अभिव्यक्तिले यतिबेला ठूलै चर्चा पाएको छ । यस विषयमा चलचित्रकर्मी र दर्शकहरु पनि विभाजित भएका छन् ।